Akụkọ - Nnyocha nri
Na July 28, 2020, ngalaba dị mkpa nke Shandong Provincial Food and Drug Administration nyere ikike maka ndị nnwale nke atọ, SGS, enyochala usoro njikwa njikwa ọgwụ Limeng, nke dabere na sistemụ njikwa HACCP mba ụwa. A tụlechara ọrụ mgbakwunye nri, ntụ ọka mmiri ara ehi na swiiti gummy.
N'ime ụbọchị abụọ ahụ, ndị ọkachamara nke atọ agwụchaala anya nyocha nke usoro njikwa mma anyị. Ọdịnaya nke nnyocha gụnyere akụrụngwa akụrụngwa na software akwụkwọ. Ndị ọkachamara tupu ịlele akụrụngwa, laabu, ebe obibi, ụlọ ọrụ mmepụta, akụrụngwa mmepụta, yana akụrụngwa nchọpụta.
N'akụkụ nke ngwanrọ, ndị ọkachamara nyochara akwụkwọ faịlụ, yana dịka ihe HACCP chọrọ, ndị ọkachamara gosipụtara ụzọ dị mkpa, nke dabere na usoro nke HACPP na isi njikwa isi na isi ihe ndị ọzọ. Ọzọ, a na-enyocha ndekọ ọzụzụ ahụ, ọchịchị ahụike na faịlụ nchekwa.
Nlere anya ụbọchị abụọ, ndị ọkachamara nke SGS nakweere ọrụ anyị na mmepụta na njikwa, ma nwee olile anya na anyị ga-etinye iwu dị elu na usoro mmepụta na njikwa, nke dabere na HACCP.
Dịka nsonaazụ nyocha, ụlọ ọrụ anyị haziri ndị isi njikwa na ndị ọrụ maka imezigharị ihe ndị ahụ na-emeghị, ma hụkwa usoro nke HACCP na mmepụta. Onye ọ bụla nwere ibu ọrụ iji hụ na ngwaahịa anyị dị mma ma ndị ahịa na ndị ahịa nabatara ya. Na usoro nke mmepe Limeng, anyị na-emekọ ihe ọnụ na mba ndị ama ama na-enyocha ahụ, dị ka SGS, BSI UK, TUV na ahụ ndị ọzọ ka usoro mmepụta anyị nwere ọrụ ziri ezi wee hụ na ahịa anyị nabatara ngwaahịa anyị .